Ifestile EKUMLAMBO-GRAZIOSA ATTIC.CIR 014O74
Igumbi eliqaqambileyo elisanda kulungiswa kwi-attic enophahla lwamaplanga kunye nemiqadi eveziweyo. Ifumaneka kumbindi weCataeggio, amanyathelo ambalwa ukusuka kwisikwere sedolophu kunye neenkonzo (ivenkile enkulu, ibha, iposi, iholo yedolophu ...) kunye nemizuzu emi-5 ukusuka ekungeneni kweVal di Mello kunye nehlathi lengingqi yaseBagni di Masino. .
Indlu inikezela ngayo yonke into oyifunayo ukuze ujabulele ukuhlala ngoxolo kwindalo yaseVal Masino ngaphandle kokuyeka intuthuzelo.
Le ndlu inekhitshi eligcwele zonke izixhobo zombane, igumbi lokuhlala elincinane elinomabonakude wesathelayithi kunye namagumbi amabini okulala. Amagumbi axhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga kwi-mezzanine efikeleleka ngeleli yokhuni. Igumbi ngalinye linegumbi lalo lokuhlambela elineshawa kunye nechromotherapy, enye yeeshawari ide ibonakale kwiintaba zaseMasino!
Kukho i-terrace encinci enokuthi isetyenziswe ziindwendwe kunye nethuba lendawo yokupaka yangaphandle yamahhala.
Ifumaneka kumbindi weVal Masino, sisisombululo esihle kakhulu sokonwaba namaxesha okuphumla kwindalo Ngokuhamba kakuhle kwindlela yokujikeleza ungafikelela kwilali yaseSan Martino kunye nomnyango weVal di Mello. Ngemizuzu embalwa ngemoto unokufikelela kwiindlela ezikhokelela kwii-refuges zeVal Masino kunye nentlambo ye-Predarossa enchanting.
Sihlala kwindawo ekufutshane kuyo nayiphi na imfuno.